warkii.com » DEG DEG: Qorshe lagu ridayo Xukuumadda Kheyre oo ka socda Muqdisho & cida hor boodeysa oo..
DEG DEG: Qorshe lagu ridayo Xukuumadda Kheyre oo ka socda Muqdisho & cida hor boodeysa oo..
Xildhibaano ka tirsan baarlamanka Soomaaliya ayaa wada olole xooggan oo la doonayo in maanta lagu rido xukuumadda ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, sida xog goordhow helnay sheegeyso.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta la filayaa inay kulan xasaasi ah ku yeeshaan xaruntooda magaalada Muqdisho, kaas oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee 2020/2021, waxaana la isku dayayaa in isla kulankaas lagu rido xukuumadda.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya inuu jiro guux ku saabsan mooshin ka dhan ah Ra’isul Wasaare Kheyre oo la doonayo in aanta la hor geenayo kulanka Xildhibaanada Baarlamaanka.
Mooshinkaan ayaa la sheegayaa inay gadaal ka riixayaan guddoonka Baarlamaanka, waxaana laga yaabaa in kulankaan xilka looga qaado Ra’isul Wasaare Kheyre iyo Xukuumadiisa, hase yeeshee waxaan weli caddeyn tirada xildhibaanada taageersan mooshinka.
Guddoomiayah baarlamanka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa si cad u sheegay inuusan aqbali doonin doorasho dadbaa. Mursal ayaa si toos ah ugu xiran ugana amar qaata madaxweynaha, oo ma lahan karti uu iskii go’aan ugu qaadan karo.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa hadda ku qulqulayo Xarunta Baarlamaanka, waxaana la filayaa in Kheyre iyo Xukuumadiisa lagu eedeeyo inay sabab u yihiin inay doorashada ku dhici weysay waqtigeeda.